Nandritra ny Andro Erantany ho an’ny Vehivavy, nisafidy hiatrika ny herisetra atao noho ny maha-lahy na maha-vavy ireo teratany ao Trinidad & Tobago (#ChooseToChallenge) · Global Voices teny Malagasy
155 ireo vehivavy matin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy nandritra ny 3 taona
Voadika ny 29 Marsa 2021 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Esperanto , Français, English
Vehivavy namonjy ny hetsipanoherana tao Woodford Square, Seranan'i Espaina, Trinidad, tamin'ny 2016. Hetsipanoherana nitranga taorian'ny fanomezantsiny nataon'ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana, Raymond Tim Kee, an'ilay japoney mpilalao vely daba vy, Asami Nagakiya, izay hita nisy namono tamin'ny 10 Febroary 2016. Sary an'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alàlana.
Tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, raha ny olona nanerana izao tontolo izao nifantoka tamin'ny ady ho amin'ny fitoviana, tamin'ny fankalazàna ny zavabitan'ireo vehivavy sy tamin'ny fiampangàna ireo fitsaratsarampoana noho ny maha-lahy na maha-vavy, ny tao Trinidad & Tobago indray nifantoka tamin'ny fiarovana ho an'ireo vehivavy taorian'ny fitomboana mampivarahontsan'ny tahan'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy ao amin'ny firenena.
Tsy latsaky ny 15 ireo fikambanana sivily avy ao an-toerana, isan'ireny ireo fikambanana feminista, mpiaro zon'olombelona, ny LGBTQ+ ary ny rariny ara-tsôsialy, nanatontosa “Diabe ho an'ny Vehivavy” tamin'ny 8 Martsa.
Matoandahatsoratra iray tao amin'ny Trinidad and Tobago Guardian no nanamarika hoe :
Hitan'ity firenena ity ny fiakaran'ireo vehivavy teny anaty sehatra rehetran'ny fiainana, miainga avy amin'ny media, politika, fampiharana ny lalàna ary ny fandraharahàna, ary tonga hatrany amin'ny maha-Filohampirenena. […]
Saingy marobe ihany koa ireo vehivavy eto amin'ity firenena ity no mbola miaritra am-pahanginana ny hirifiry […] betsaka no nisedra ary mbola misedra herisetra.
Ny roa vao haingana sy tena niavaka indrindra tamin'ny famonoana vehivavy tao amin'ny firenena ka nahatonga ny olona ho tonga saina momba ny maha-maika ilay olana dia ny an'i Ashanti Riley, izay fakàna an-kery nataon'ny mpamilin'ny orinasa tsy miankina mpampanofa fiara Private Hire (PH) sy ny an'i Andrea Bharatt, izay ny nahitàna azy velona farany dia izy sy ny namany niakatra tao anaty fiara iray nitondra takelaka sandoka milaza ho taxi.
Taorian'ireo vono olona roa ireo, nanandra-peo ry zareo Trinbagoniàna ny amin'ny tokony hisian'ny dingana mazava atao hiarovana ny vehivavy. Hatreto aloha, nolanian'ireo parlemantera ilay Evidence Bill (tolodalàna momba ny porofo), izay mampiditra rafitra maoderina kokoa amin'ny fanangonana porofo ho atsofoka any anaty raharaham-pitsaràna heloka bevava, ary nekeny ho toy ny fitaovana fiarovantena ny fampiasàna tsifotra dipoavatra, nahatonga ny maro hisaintsaina raha toa ny fahafatesan'ireo vehivavy roa ireo ka mba niteraka fiovam-penitra mahery vaika ihany amin'izay tian'ireo olompirenena izorana nony farany.
Mbola tsy nitsahatra ny tsindry avy amin'ireo olompirenena sy vondrona fiarahamonina sivily – isan'ireny ilay Diabe ho an'ny Vehivavy tamin'ny 8 Martsa. Ilay Diabe, ezaka iray niraisan'ireo fikambanana sivily isankarazany, toy ny Womantra, CAISO, Conflict Women, Act for Change TT, ary ny Tambajotran'ireo ONG ao TT ho an'ny fampivelarana ny vehivavy, nihaona tao amin'ny Seranan'i Espaina, ary nifarana teo anoloan'ny Trano Mena, foiben-toeran'ny antenimiera ao Trinidad & Tobago, izay niantsoan'ireo mpandray anjara an'ireo mpikambana tao amin'ny governemanta sy ny mpanohitra mba “hanao hetsika avy hatrany hanoherana ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy”
Marobe ihany koa ireo mpisera amin'ny aterineto—isan'ireny ny lehilahy—nandefa lahatsary manazava ny antony “nivoahan-dry zareo nanao diabe.”
Vehivavy namonjy ny hetsipanoherana tao Woodford Square, Seranan'i Espaina, Trinidad, tamin'ny 12 Febroary 2016, taorian'ny nahitàna ny fatin'ilay japoney mpilalao vely daba vy, Asami Nagakiya, izay hita nisy namono…Ny soratra lanjainy, “Ampianaro ny zanaka lahintsika tsy hanararaotra vehivavy,” dia milaza ny fototry ny olana momba ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy ao Trinidad & Tobago. Sary an'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alàlana
Tanatin'ny fanahy nitondrana ilay lohahevitra #ChooseToChallenge tamin'ity taona ity ho fankalazàna ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, marobe ireo vehivavy Trinidadiàna no naneho ny heviny, anisan'izany ny Filoham-pirenena Paula-Mae Weekes, izay niteraka kiana marobe tokoa teny anaty tambajotra sôsialy ny fahanginany imasom-bahoaka nanoloana ny fahafatesan'ireo vehivavy roa. Raha noheveriny fa “rariny sy azo takarina tsara izany ao anaty fiarahamonina iray efa zatra ny tonga dia maneho hevitra eo noho eo sy ny famokimokisana ataon'ny media,” notsipihan'ny filoha fa ny fiarahamonina dia tsy maintsy mizaka ampahan'andraikitra amin'ny fanefena ny karazana lehilahy mahavita heloka tsy hay lazaina tahaka izany.
Nandritra ny taona telo nitazonany ny toerana maha-filohampirenena azy, 155 raha kely indrindra no isan'ny vehivavy namoy ny ainy noho ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy; ny fisoloana vava tsy mitsahatra ataon'ireo mpandatsabato mavitrika, hoy izy, no afaka hanampy hametrahana toepiainana iray hahatonga ny fiovàna tena manova tokoa rehefa ny fitoniana sy ny fahasambaran'ny vehivavy eto amin'ny firenena no resahana.
Niaiky ilay mpanao hatsikana, Simmy the Trini, raha nandefa tao amin'ny Facebook:
Raha tiantsika ny hahita fiovàna, ilaintsika ny mitozo manohitra ireo rafitra misy fiantraikany ratsy eo amintsika. Ilaintsika ny manohy manao tsindry mba hisian'ny lalàna handinika ireo olana isankarazany sy fanamby iainantsika.
Feno fankasitrahana aho mbola velona amin'izao fotoana iarahan'ny vehivavy manandra-peo sy mivoaka manohitra ny habibiana atrehanay izao. Tsy vonona intsony ny hiaritra am-pahanginana ny hirifiry. Tsy ho menatra intsony na hatahotra hitaky ny zo hiainana ny fiainana an-kalalahana tsy misy herisetra ary fahafahana mahazo fanabeazana, fitsaboana ary fahafahana miahy tena.
Araka ny nametrahan'ny matoandahatsoratry ny Guardian azy hoe:
“tsy raharahako intsony ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na maha-vavy sy ny herisetra an-tokantrano ao Trinidad&Tobago”; raharahan'ny tsirairay ireny ankehitriny. Jerena araka ny maha-izy azy izy ireny—heloka bevava atao amin'ny vehivavy. Tsy ekena ara-kolontsaina intsony ny heloka bevava. Tsy ho afaka hanaovana fialantsiny intsony ireo heloka bevava, na hoe ho vitavita mora fotsiny.
Nandona mafy ireo vehivavy teto amin'ity firenena ity ireny heloka bevava ireny, ary niteraka fahavoazana tsy hay faritana tao am-pon'ity firenena ity—izay tsy isalasalàna fa ireo vehivavy izany.
8 ora izayHaiti